Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. प्रेरक प्रसंग – Page2– Janata Live
गौतम बुद्धका प्रेरक उपदेशहरू
आफ्नो दुःख कसैलाई पनि नभन्नु किनकि सबैजना तपाईंसँग खुसी नहुन पनि सक्छन् । त्यो मान्छेले तपाईंको मूल्य कहिले पनि बुझ्ने वाला छैन् । जसको लागि तपाईं जहिले पनि तयार भएर बस्नु हुन्छ । कसैको बाध्यतामा नहास्नु किनकि बाध्यता कसैले पनि किनेर ल्याएको हुँदैन । डराउनु नराम्रो समयसँग किनकि नराम्रो समयले कसैलाई पनि भनेर आएको हुँदैन । हरेक मानिसको दुईवटा कथा हुन्छ । एउटा त्यो जुन उसले सबैलाई सुनाउँछ र अर्को त्यो जुन उसले सबैबाट लुकाउँछ । न त तपाईं आफुले आफुलाई अंगालो हाल्न सक्नुहुन्छ । न त तपाईंले आफ्नो शिर आफ्नो काँधमा राखेर रुन सक्नुहुन्छ । पैसाले मात्र एउटा भाषा...
जुनसुकै मान्छेको पनि सफलता अन्तिम लक्ष्य हो । तर सफलता आफैँमा स्थिर प्रकृतिको हुँदैन । एउटा विन्दुमा सफलता भेटेपछि अर्को गन्तव्य तय गर्नु मान्छेको स्वाभाविक गुण हो । त्यसैले अन्तिम लक्ष्यको रूपमा रहेको सफलतालाई भेट्नको लागि मान्छेलाई फरक फरक किसिमको उत्प्रेरणा र सुझावहरूको आवश्यकता पर्छ । विश्वका कतिपय दार्शनिकहरूले मान्छेको यही मनोभावना बुझेर आफ्ना अमूल्य वचनहरू दिएका छन् । जुन मान्छेमा जीवनोपयोगी हुन सक्छ । त्यही मध्येका केही जीवनोपयोगी वचनहरू तल उल्लेख गरिएको छ । जसलाई जानाजान झूट बोल्नुमा लज्जा हुँदैन, ऊ जस्तोसुकै पाप गर्न पनि पछि पर्दैन । त्यसैले हामी एउटा संकल्प गरौं कि हासोमजाकमा समेत हामी कहिलै झूट...
एक प्रेरक प्रसंग ‘अस्थिरता’
मजदुरी र नाटक कम्पनीमा काम गरिसकेपछि उनले चौकीदारको काम गरे । उनका मित्रहरुले भने— एक ठाउँमा टिक्न नसक्ने आखिर यहाँ कति दिन टिक्ला र ? आखिर त्यही भयो पनि । एक दिन जाँच अधिकारीहरुले कामको लागि अयोग्य बताएर उनलाई चौकीदारको नोकरीबाट निकालिदिए । तर उनलाई आफूमाथि भरोसा थियो । अब उनले एउटा स्कुलमा अध्यापन कार्य शुरु गरे । त्यसै बेला सेनामा नोकरीको लागि आवेदन मागियो । उनको लगन र श्रमनिष्ठा देखेर हेडमास्टरले चारित्रिक प्रमाण–पत्रमा लेखिदिए— स्वच्छ र परिश्रमी । सेनाबाट उनी लोकसेवाको क्षेत्रमा गए । आफ्नो राजनीतिप्रतिको अभिरुचि, जनसम्पर्क, व्यवहार कुशलता, लगन र निष्ठाको बलमा एक दिन यिनै बुडरो विल्सन...
प्रेरक प्रसंग : जो दृष्टिबिहीन भएरै आविष्कार गरे ब्रेललिप
काठमाडौँ- आज संसारभरिका हजारौँ दृष्टिविहीनहरुले स्कूलदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पढाई सफलतापूर्वक छिचोलेर डिप्लोमा, डिग्री र पिएचडी सम्मका उपाधिहरु हात पारिसकेका छन् । यसरी दृष्टिविहीन अन्धाहरुको निम्ति छुट्टै लिपी र पुस्तकको आविष्कार गर्ने व्यक्ति लुई ब्रेल हुन् । लुई ब्रेल आफू स्वयम् अन्धा थिए । एउटा अन्धो मानिसले संसारको निम्ति यति महान् काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा कसैले सोचेका थिएनन् । उनकै नामबाट ब्रेललिपी नाम रहन गएको हो । जुन लिपीको माध्यमबाट संसारभरिका अन्धा अपाङ्हरुले अध्ययन गर्न पाइरहेका छन् यसै लिपीले आज लाखौँ अन्धाहरुलाई अक्षरको उज्यालो दुनियाँमा ल्याइदिएको छ र उनीहरु शिक्षित बनेका छन् । स्वावलम्बी बनेका छन्, आत्मनिर्भर बनेका छन् । यिनी...
एजेन्सी- भनिन्छ गरेमा के सम्भव छैन ? मेहनत र कठीन परिश्रम गरे जे गर्न पनि सम्भव छ । आज हामी तपाईलाई यस्तै एउटा प्रेरक प्रसंगको बारेमा जानकारी दिनेछौँ । एक महिलाका दुई वटै हात छैनन् तर पति उनी विमान उडाउँछिन् । भन्दा तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर यो बास्तविकता हो । उनी खुट्टाको सहयोगमा विमान उडाउँछिन् । त्यति मात्रै होइन उनले गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा समेत नाम लेखाएकी छन् । उनी संसारकै एकल महिला हुन् । जसले विमान खुट्टाले उडाउँछिन् । उनको नाम रहेको जेसिका । उनीसँग संसारकै यस्तो लाइसेन्स छ । जो अन्य शारीरिक अशक्तता भएका मानिससँग...
१. कामको परिणामले अनिवार्य रुपमा त्यस्तै प्रकारले पिछा गर्दछ, जसरी रातले दिनको पिछा गर्दछ ।गौतम बुद्ध २. जीव हिंसाबाट विरक्त हुनु, चोरीबाट टाढा हुनु, मिथ्याबाट टाढा हुनु, यसलाई नै पवित्रता भनिन्छ । ३. पतीत दुई किसिमका हुन्छन्, मापदण्ड भएका पतित र मापदण्ड नभएका पतित । मादण्ड नभएका पतीतहरुले आफू पतीत भएको थाहा पाउँदैनन् र सधैं पतीत भएर रहन्छन् । मापदण्ड भएका पतितहरु पतीत अवस्थाबाट माथि उठने कोसिस गर्दछन् किनकी उसलाई पतीत भएको द्दान हुन्छ । ४.तिमी मेरो कुरा परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार गर । गौतम बुद्ध ५. असल हृदय भएकालाई अलिकति व्यापक परिश्रम पनि कल्याणकारी नै हुन्छ । ६. दयाको...
बुद्ध वाणी: सेयर गरि चिन्तन बढाऔ🙏 १, मूर्खको संगत नगर्नु २, विद्वानको संगत गर्नुस् ! ३, पुज्यनीयको सम्मान गर्नुस् ! ४, अनुकूल स्थानमा निवास गर्नुस्:! ५, पुण्य आचरणको संचय गर्नुस् ! ६, कुशल धर्मको संकल्प गर्नुस् ! ७, बहुश्रुत हुनु, धर्मग्रन्थको ज्ञान हुनु ! ८, शिल्प विधाएँ सीख्नु ! ९, शिष्ट हुनु ! १०, सुशिक्षित हुनु ! ११, सुन्दर वचन बोल्नुस् ! १२, आँमा बाबाको सेवा गर्नुस् ! १३, श्रीमती र बच्चाको सेवा गर्नुस् ! १४, पाप रहित कर्म गर्नुस् ! १५, दान दिनुस् ! १६, मन, वचन र कर्मको पुण्यले सत्य गर्नु, धर्मको सेवा गर्नुस् ! १७, आफ्नो साथी...
कर्म अनुसार फल पाउँछौं भनेर जबसम्म बुझ्दैनौं, तब सम्म सधैं निराशा, दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ –गौतम बुद्ध
भगवान सम्बन्धी भनाइहरु १. कर्म अनुसार फल पाउँछौं भनेर जबसम्म बुझ्दैनौं, तब सम्म सधैं निराशा, दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ । –गौतम बुद्ध २. पैसा खर्च गरेर ईश्वर भेटिन्न । प्रेमचन्द ३. ईश्वरको बाटो मान्छेको बाटोभन्दा पनि धेरै विपरीत हुन्छ । स्वामी विवेकानन्द ४. ईश्वर भ्रष्ट हुन सक्छ तर ईष्र्ययालु भने कदापि हुँदैन । अल्बर्ट आईन्सटाईन ५ ईश्वरका अनगिन्ति नाम छन् । किनकी उनका लिलाहरु असंख्य छन् । –महात्मा गान्धि ६. ईश्वर एउटै छन् र उहाँ एकतालाई मन पराउनुहुन्छ । –हजरत मुहम्मत ७. परमात्मा सर्वगुण सम्पन्न, सबैव्यापि र सर्वज्ञाता छन् । –आचार्य कौटिल्य ८. ईश्वर सुक्ष्म छ तर दुष्ट स्वभावको छैन ।...
फ्रान्सिस वेलेन्ड पार्कर अमेरिकाका एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् थिए । बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा उनको योगदान निकै ठूलो थियो । निकै टाढा-टाढाबाट बालबालिकाको शिक्षाका सम्बन्धमा राय-सल्लाह लिन उनीकहाँ मानिसको भिड लाग्ने गथ्र्यो । उनी पनि सकेसम्म सहज तरिकाबाट सबै जिज्ञासुको जिज्ञासा शान्त बनाएर पठाउने गर्थे । एकपटक शिक्षाविद् पार्कर कुनै एक स्थानमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बालशिक्षाबारे आफ्नो मन्तव्य दिइरहेका थिए । उनको मन्तव्य पूरा भएपछि त्यहाँ प्रश्नोत्तरको क्रम सुरु भयो । प्रश्न सोध्ने क्रममा एक महिला आफ्नो स्थानबाट उठिन् र पार्करसँत प्रश्न गरिन्- महाशय ! म आफ्नी छोरीको पढाइ सुरु गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि सबैभन्दा उत्तम उमेर कुन हो ? पार्करले...